Mankanesa any Ibiza amin'ny vidiny 8 euro fotsiny - Aza adino ity tolotra ity! | Vaovao momba ny dia
Susana godoy | | Ibiza, tolotra
Manidina any Ibiza amin'ny vidiny 8 euro fotsiny, drafitra iray ihany io. Satria marina fa indraindray isika dia afaka mahita tolotra tena mahavariana, saingy angamba mihoatra lavitra azy ireo ity iray ity. Sidina fitaterana an-dalambe ho an'ny vidiny tsy hay tohaina mankany amin'ireo toerana fizahan-tany misy azy ireo.
Izany ve, ny Nosy Ibiza Mamela antsika ho lava sy fety ary toerana mahaliana maro hafa izany. Raha mbola tsy nifankahita taminao ianao dia angamba izany no fotoana mety indrindra. Mbola amin'ny faran'ny volana septambra sy oktobra dia afaka mankafy ny mari-pana mahafinaritra indrindra ianao. Na aiza na aiza no jerenao, dia tsara io!
1 Sidina mandroso mankany Ibiza
2 Aiza no hijanonako any Ibiza?
3 Inona no ho hita ao Ibiza
3.1 Tsidiho i Dalt Vila
3.2 Vedrá io
3.3 Can Cave Marça
3.4 Fiangonan'i Santa Eulalia
3.5 Ankafizo ny filentehan'ny masoandro
Sidina mandroso mankany Ibiza
Avy any Madrid ny sidina. Zavatra mahazatra rehefa miresaka tolotra toy izao, izay matetika miala amin'ny seranam-piaramanidina Madrid na Barcelona. Mbola miatrika a tapakila mandroso amin'ny vidiny 8 euro. Ary koa, manana safidy roa azo isafidianana isika. Izany hoe, ny fiaingana dia mety maraina be na mitataovovonana. Raha ny fiverenana dia hanana safidy iray ihany amin'ny fotoana.
Hiara-manidina amin'ny orinasa Ryanair ianao. Raha aleonao misafidy orinasa hafa dia manana tolotra azonao jerena koa ianao manodidina ny 6 euro lafo kokoa. Hotazoninay ity dia izay hiainganay amin'ny 30 septambra ity ary ny 5 oktobra dia hiverina ny XNUMX. Ka hanana fotoana hankafizana toerana toa an'i Ibiza isika. Vonona ianao ?. Azonao atao izao ny manao famandrihana ao eDreams.
Aiza no hijanonako any Ibiza?
Mazava ho azy, ny safidy no be indrindra. Fa ny fahitana ny vidin'ny tapakila dia tsy tianay ny hihoatra izany amin'ny trano itoerana. Noho izany dia nifidy trano vitsivitsy izahay. Satria mahazo aina foana, raha sanatria ka miaraka amin'ny olona maro kokoa isika. Amin'ity tranga ity, ny Lido Apartments dia manolotra vidiny anay 378 euro mandritra ny 5 dimy alina ary ho an'ny olona roa. Manana lakozia fototra izy ireo ary tena akaiky ny Castle of Ibiza. Fandriho azy ireo ao Hotels.com.
Inona no ho hita ao Ibiza
Manana andro maromaro isika mitsidika an'i IbizaNoho izany, tsy tokony hanahy ny amin'ny fotoana koa isika. Ny zavatra tsara indrindra dia ny fandaminana ary hankafy ny fialantsasatra isika. Saingy, mamela anao amin'ny sasany amin'ireo tranokala tena ilaina tsy maintsy hitanao na hatao ianao. Satria ankoatry ny fety sy ny morontsiraka dia misy ihany koa ny safidy mety izay andrasanao.
Tsidiho i Dalt Vila
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo teboka tokony horaisina. Momba ny tapany ambony amin'ny faritra manan-tantara. Izy io dia manana rindrina taloha, izay natsangana mba hiarovana ity tanàna ity amin'ny fanafihan'ny Tiorka. Any ianao dia afaka mankafy ny tetezana romana, ny arofanina ary ny vavahady lehibe.
Rehefa afaka andro maromaro dia afaka mitsidika ny nosy izahay, Vedrá io. Manakaiky an'i Ibiza izy, amin'ny faritra lavorary izay miafara amin'ny fomba fijery. Avy amin'izany, mahavariana ny fomba fijery, saingy tsy izany ihany fa miteraka fandriam-pahalemana. Ka tsy mahagaga raha reraka ianao mandehandeha na mitsidika toerana tsy mijanona, dia tsara ny fisaintsainana.
Can Cave Marça
Ho hitanao ilay lava-bato ao amin'ny kaominina, Sant Miquel, avaratry ny nosy fotsiny. Izy io dia iray amin'ireo tsangambato manan-tantara manan-danja indrindra. Satria efa an-taonany maro koa izy io. Nonina an-tsokosoko koa izy io, saingy androany, iray amin'ireo toeran-kaleha hafa tsy azonao adino ny dia ataonao.
Fiangonan'i Santa Eulalia
Ny iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra eto amin'ny nosy dia Santa Eulalia Des Riu. Any ianao dia afaka mankafy fiangonana mimanda. Iray amin'ireo toerana hahitanao tsiambaratelo maro ary tsy handiso fanantenana izany koa.
Ankafizo ny filentehan'ny masoandro
Tsy ho tara amin'ny filentehan'ny masoandro mahafinaritra ianao. Ho an'ity, manana zoro maro eo am-pelatananao ianao ary ny iray amin'izy ireo dia mety ho bay ao Sant Antoni de Portmany. Fantatra izany satria manamafy ny rehetra fa io dia iray amin'ireo teboka ankafizin'ny masoandro kokoa. Tsy maintsy mamela fisalasalana isika!.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » tolotra » Manidina any Ibiza amin'ny vidiny 8 euro fotsiny